रोमबाट नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुभारम्भ – News Portal of Global Nepali
रोमबाट नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुभारम्भ
रोम । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० युरोपको औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। इटालीको रोममा शुक्रबार साँझ एक समारोहबीच पर्यटन प्रवद्धनको कार्यक्रमसहित शुभारम्भ भएको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल बिबिधतायुक्त देश भएकाले नेपाल पुग्न अनुरोध गरे। भ्रमण वर्ष २०२० का कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्यले भिजिट नेपालको उदेश्यबारे प्रकाश पार्दै प्रस्तुति राखेका थिए। उनले भिजिट नेपाल २०२० को उदेश्यबारे प्रकाश पारे। यसवर्षमा पर्यटकहरुले लिन सक्ने फाईदाका बारेमा पनि उनले जानकारी गराए।
कार्यक्रममा पर्यटन सचिव मोहोनकृष्ण सापकोटा,होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष सृजना राणा, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, सपिलाराज भण्डारीलगायतले नेपालको पर्यटन प्रवद्धनबारे बोलेका थिए।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको पनि कार्यक्रममा बिशेष अतिथिको रुपमा सहभागी थिए ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आयोजक, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा युरोपस्थित नेपाली राजदूतहरुबीच छलफल भएको छ। भ्रमणवर्षलाई सफल पार्न दूताबासहरुका गतिबिधिहरुबारे चासो राखिएको थियो। सो अबसरमा राजदूतहरुले युरोपका बिभिन्न मुलुकहरुमा भएका पर्यटन प्रवद्वनका कार्यक्रमहरुबारे जानकारी गराए। भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न प्रवद्वनका गतिबिधिहरुलाई तिब्र पार्न सहभागीहरुले सुझाव दिए।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, पर्यटन सचिव मोहोनकृष्ण सापकोटा,भ्रमण वर्ष २०२० का कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्य,होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) का अध्यक्ष सृजना राणा,गैर आबासीय नेपाली अभियन्ताहरु लगायत नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधिहरुको छलफलमा सहभागीता रहेको थियो।